Indawo egqibeleleyo yosapho elunxwemeni - I-Airbnb
Indawo egqibeleleyo yosapho elunxwemeni
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguSandra
Relax kwigumbi lethu elitsha kraca eli-3, igumbi lokuhlambela eli-2 losapho oluselunxwemeni kunxweme olungaphambili kwi-Two Rocks. Umgama nje omfutshane wemizuzu emi-3 ukuya kuLeeman's Landing, enye yeelwandle eziMabini ezibalaseleyo.
Indlu ixhotyiswe kakuhle ukuze uhlale usapho lwakho kunye nemidlalo, iiDVD kunye neWIFI. Kukho igadi engasemva ekhuselekileyo kunye nengca yokudlala imidlalo yasemva kweyadi. Ekupheleni kosuku, khaba emva kwaye ujabulele ukutshona kwelanga kwibalcony.
I-marina kunye neziko lokuthenga lasekhaya elinevenkile enkulu ye-IGA, indawo yokubhaka kunye neekhefi ezininzi kukumgama nje omfutshane we-2 min.
Le yindlu yethu yaselwandle yosapho esingathanda ukwabelana nawe ngayo. Yimpelaveki emnandi okanye ikhefu ngexesha leeholide zesikolo. Vuka uvuse isandi solwandle kwaye wonwabe yonke into enokunikelwa yi-Two Rocks.
Indlu ixhotyiswe kakuhle kwaye ukuba kukho nantoni na enokwenza ukuhlala kwakho kukhululeke ngakumbi ndicela undazise.
Indlu yaselwandle ilala ubuninzi babantu abasi-7 kulungiselelo lwe:
Igumbi lokulala 1-Indawo yokulala 2-Ibhedi ye-Queen ene-ensuite kwaye uhambe ngengubo-igumbi le-portacot
Igumbi lokulala eli-2 - lokulala 2 - Ibhedi ye-Queen eyakhiwe ngengubo
Igumbi lokulala 3-Ilala 3 - 1 ibhedi yebhedi, ibhedi e-1 eyedwa enengubo eyakhiweyo
I-portacot ifumaneka ngaphandle kweendleko ezongezelelweyo
Ikhitshi / Indawo yokuhlala / yokutyela
Umbindi wendlu yikhitshi yesicwangciso esivulekileyo / indawo yokuhlala yokutyela. Lo mmandla unesimo somoya esibuyela umva ukugcina upholile ehlotyeni (nangona uya konwabela nje impepho entle yaselwandle) kwaye ushushu kwaye upholile ebusika.
Ikhitshi linendawo yesidlo sakusasa esinezihlalo ezi-3 kwaye ixhotyiswe kakuhle ngesitya sokutya kunye nezixhobo zangoku ezibandakanya umpheki wombane, i-oveni yombane, ifriji entsha / isikhenkcisi, imicrowave, isitya sokuhlamba izitya, iketile, umatshini wekofu weNespresso kunye nokushicilela isangweji ethosiweyo. Kukho isitulo esiphezulu esifumanekayo sabantwana abancinci.
Indawo yokuhlala ine-43” ye-LED TV, iDVD/Blu-ray player, inkqubo encinci yeHiFi (iCD, unomathotholo, kunye noqhagamshelo lwebluetooth) kunye nokhetho lweencwadi, iimagazini, iiDVD., imidlalo kunye neepuzzle.
Itafile yokutyela izihlalo ukuya kuthi ga kwi-8 apho unokonwabela ukutya ukubukela ulwandle.
Igumbi lokulala elikhulu line-ensuite eneshawa, indlu yangasese kunye namampunge.
Igumbi lokuhlambela lineshawa kunye namampunge kunye nendlu yangasese eyahlukileyo ngaphandle kwempahla. Akukho bhafu.
Indawo yokuhlamba inomatshini omtsha wokuhlamba ukuba uyawufuna.
Kubonelelwe ngeengubo, ilinen ecocekileyo, imiqamelo kunye neetawuli.
Iyadi yangaphambili iye yalungiswa ngokutsha kunye nezityalo zendalo ukuxhasa indawo eselunxwemeni kunye nendlela yokufikelela endlwini. Kukho indawo yokupaka iimoto ezi-2 ngaphantsi kwendlu.
Iyadi yangasemva ibiyelwe kwaye ikhuselekile kwaye ikhuselekile kubantwana. Inendawo evulekileyo egangathiweyo ye-alfresco enetafile yezihlalo ezili-10 zangaphandle ezinezitulo kunye ne-BBQ yegesi. Yonwabela ukuphumla ngencwadi ngelixa abantwana bakho besonwabela ingca eluhlaza, ilungele umdlalo weqakamba ongasemva kwendlu okanye intenetya yetotem.
Kukwakho neshawari yangaphandle ozakuyivasa emva kokuya elunxwemeni.
Iveranda engaphambili ijonge iindunduma zommandla wonxweme kunye noLwandlekazi lwaseIndiya. Yindawo entle yokuphumla kwaye ukonwabele umbono ovela kwidesika kusasa nangokuhlwa.
IiRock ezimbini zibekwe malunga. Imizuzu engama-50 emantla ePerth kwaye sisiseko esihle kakhulu sokuhlola ummandla. Izinto ezikhangayo ezibandakanya uKumkani uNeptune kunye neminye imifanekiso eqingqiweyo yaseAtlantis, iYanchep Lagoon, iPaki yeSizwe yaseYanchep (jonga i-koalas, i-kangaroos, ichibi, imiqolomba, kunye neendlela zokuhamba), i-Gingin Discovery Centre kunye ne-Guilderton / Moore River.
Le ndlu ikwindlela iTwo Rocks ejonge uvimba wonxweme. Ungahamba ngokulula ukuya kuLeeman's Landing, enye yeelwandle eziMabini ezibalaseleyo ezinendawo yokudlala encinci kunye nezixhobo zeBBQ.
Ekupheleni kwesitrato yiCassilda Park (i-100 yeemitha, 1 min walk) eyi-bushland ikakhulu.
ICharnwood Reserve kukuhamba ngemizuzu esi-7 kwindlela eneepaki ezinkcenkceshelwayo, ibala lokudlala, indlela yokutyibiliza etyibilikayo, ibala lebhola yomnyazi kunye nemifanekiso emidala yaseAtlantis.
Indawo yokuthenga ye-Two Rocks kunye ne-marina kukumgama nje omfutshane we-2 min. Indawo yokuthenga inevenkile enkulu ye-IGA, ivenkile yotywala, indawo yokubhaka, indawo yokwenza iinwele kunye neekhefi ezininzi. I-marina ilungile kumlobi okhutheleyo onezixhobo zokuqalisa isikhephe.
Uya kuba nendlu yokuzonwabisa kuwe.
Incwadana yendlu iyafumaneka ekhitshini ukwenzela ukuba ube lula
Ukuba kukho naziphi na izinto ezingxamisekileyo - ungaqhagamshelana nathi.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Two Rocks